Qalab Chromecast Google waa cadaalad ah dhalinyarada in ay suuqa, laakiin horumarinta badan iyo shirkadaha geeyo waaweyn ee horay u booday on fursad ay ku qayb ka mid ah Google ee kharash yar, qalab geeyo Mudanayaasha fudud noqon. Liiska kama dambaysta ah waxaa ka mid ah Tani Chine in lagu heli karaa app dukaanka macruufka, Google Play suuqa, Phone Windows ka Store, oo si toos ah u dhex browser chrome ah. Apps waxaa lagu kala soocaa by category iyo warbaahinta iyagoo doonaya inay samatabbixiyo.
Qeybta 1: TV & Movies
Qeybta 2: Pictures & Videos
Qeybta 3: Games
Qeybta 4: Utility
Qeybta 5: Music
Description: Netflix waa hawshii geeyo filimada inta badan loo jecel yahay in uu ka bedelay Kiraynta movie sanadihii la soo dhaafay. Wixii ka yar $ 10 waxaad u helaan boqolaal kun oo dhacdooyin TV, filimada iyo warbaahinta kale. Netflix waa adeeg qiimo wayn u leh dad badan, oo siiyay content in aad TV via Chromecast waa dareen leh oo fudud iyada oo feature tuuraan.
Price: Laga billaabo $ 7.99 bishiiba
Description: HBO GO siinayaa inaad hesho aad jeceshahay muujinaya TV HBO iyo filimada waqti kasta, meel kasta. Waayo, kuwa naga mid ah ee doonaya cable warbaahinta weyn on go ah, HBO GO waa tallaabo weyn ee naftaada gelinaya in gacanta warbaahinta in aad rabto. Chromecast qaadataa ka kooban oo tayo sare leh ay bixiyaan oo soo bandhigay on your TV in daqiiqado oo kuu ogolaanaysaa inaad sii wadato daawashada aad telefoon ama kiniin ah marka aad ka tagto guriga.
Price: Laga billaabo $ 15 bishiiba (la Times cable a)
Description: Times ayaa premium u adeega Hulu TV. Hulu Plus waxay keentaa xilli ciyaareedkan ee TV muujinaysaa online wax yar ka dib markii ay hawada, kuu oggolaadaan in aad si aad u daawato ugu danbeeyay ee ay muujinayso TV waqtigaaga. Daraya adeegyada sida tan galay ururinta warbaahinta aad kaa caawin kara inaad bedelo adeegyada cable aad adeegyada dheeraad ah oo ku doonayo, samaynta Hulu ee "maalin ka dib markii ay hawada" collection of muujinaya TV sameeyo Hulu qiimo badan.
Price: $ 7.99 bishiiba
Description: Tani waa Google ee suuqa aad u gaarka ah ee filimada iyo bandhigyada TV, qayb ka mid ah dukaanka play iyo qayb ka mid ah aad u soo daadiyey qalab Chromecast ah. Waxaad waxaa la siiyaa ikhtiyaar ay ku gataan ama ku dildillaacaan oo xul ah ee filimada iyo TV muujinaysaa heli karo si toos ah hoorto in aad Chromecast ama qalab kasta oo kale oo ay taageerayaan dukaanka play ah.
Price: Items yihiin shaqsi ahaan jaban, waxyaabaha xayaysiis lacag la'aan ah bil kasta
Description: Haddii aad tahay qof aqoon u leh ee brand Red Bull, aad ayay u badan tahay inay ogaadaan in shirkadda maal jiray cayn kasta oo dhacdooyin iyo madadaalada sida music, TV, isboorti iyo dhacdooyinka kale ee nool. The app TV Red Bull iyo website bixiyaan meel sahlan si aad u daawato wax walba oo Red Bull fur sida ay dhacdo nool.
Description: MLB.TV kuu ogolaanaya in aad si aad u daawato kasta oo ka mid ah suuqa ugu weyn ee ciyaarta baseball horyaalka aad la eego. Waxaad dooran kartaa in habayn ee ciyaarta nool ama daawado kulan ee baahida in HD. Sidoo kale kasoo muuqday waa archives full of kulan nool iyo idaacadaha iyo siyaabo fara badan si uu ula jaanqaado kooxaha aad ugu jeceshahay.
Price: $19.99 bishii (standard) / $ 24.99 bishiiba (premium)
Description: Crackle bixisaa filimada asalka Hollywood iyo TV muujinaysaa lacag la'aan ah iyada oo aan la mobilada iyo go'antahay weligood kuma loo baahan yahay. Beyond filimada dhererka feature oo dhan dhacdooyin TV, adeegga sidoo kale bixisaa ka dambeeya content goobaha ee filimada cusub oo soo socda. Crackle waxaa iska leh Sony si inta badan content ay bixiyaan waa Sony laakiin waxa ay mar walba ku daray marmarka iyo bandhigyada cusub oo soo socda.
Price: Free (Ad-taageerayaan)
Description: Adeegan waxaa haboon galay Daaqad Misbaax ku dhaqan gaar ah si ay liiska Chromecast barnaamijyadooda la heli karo. Sameeyey si samatabbixin content Kuuriyaan, dad badan oo mahad karaan warbaahinta ay bixiyaan. Waxay leeyihiin content oolna ah qaybaha badan oo ay ka mid yihiin ruwaayado Kuuriyaan, Isladooda, Japan & filimada, telenovelas iyo videos music in ay leeyihiin subtitles in ka badan 160 luqadood.
Price: Free (Ad taageeray), Premium ($ 3.99 bishiiba)
Description: Tan iyo Chromecast ayaa laga bilaabey United Kingdom, network telefishanka BBC ayaa sameeyay oo la sii daayay app ay ku qulquli content in ayaa si toos ah baahiyey in aad TV. Your kiniin ama casriga ah u dhaqmo sida fog ah si loo gaarsiiyo content ay bixiyaan BBC oo la isla soo diray inuu u ciyaaro TV.
Description: VEVO waxa ay inta badan loo aqoonsan yahay music video database halkaas oo dad badan oo farshaxanka tagaan si ay u ururiyaan iyo boostada videos music ay. VEVO ayaa videos tayo sare leh la heli karo si qulquli oo inta badan dhejisaa content gaar ah iyo performances.Every fanaaniinta la garan ayaa ay channel u gaar ah oo ku saabsan goobta iyo YouTube, kaas oo si dhow u la dhexgeliyey VEVO si ay u muujiyaan saamaynta video kasta oo gebi ahaanba intii suurto gal ah.
Price: Free (Ad taageerayaan)
Description: ugu ballaaran oo si weyn loo aqoonsaday content qaybsiga madal adduunka ayaa, YouTube bixisaa meel loogu talagalay dadka si ay u abuuraan, xirmaan, wargeliyaan oo ay wax ku bartaan isticmaalka user abuuray videos in ay yihiin oo kaliya ku koobnayn oo ay hal-abuurka iyo heshiis user.
Description: RealPlayer uu noqday RealPlayer Cloud bilihii la soo dhaafay, isagoo intaa ku daray daruur adeeg taageero in aad habayso videos ka qalab ama madal kasta. Technology ayaa ka dambeeya adeegga waxaa loogu tala galay si aad u awoodo in aad u aragto nooc kasta oo video ah oo ku saabsan qalab kasta oo qaab ah in qalab aad taageertaa. Tani waxay si qurux badan u tarjumay in ay Chromecast ah, kuu oggolaadaan in aad si aad u daawato ku dhawaad ​​kasta video on your TV.
Price: Free (2GB), Premium (laga bilaabo $ 5 bilood 25GB)
Description: brand app free cusub Google ayaa ka dhigay in ay sawiro ka ah browser Android, iPhone, iPad, ama Chrome iyo edit qaado oo iyaga soo bandhigaan aad shaashadda weyn.
Description: Plex waa adeeg dhisay in uu abaabulo dhammaan warbaahinta shakhsi. Plex Uploads dhammaan files warbaahinta in aad xisaabta si aad iyaga u heli karaa qalab kasta oo socon. Waxaa fudud in Mudanayaasha iyo fududahay inaad ku raaxaysatid content on TV xagga Chromecast.
Description: Dhisay inay ka Washington Post samatabbixin content, app this koriyo news inta badan kuwa dhexdhexaadka ah ee video. Waa hab fiican si aad war si immersive midig ka raaxo aad sariirtaydii ku qalab Chromecast heli. Content waxaa laga soo ururiyey ilo badan oo curated by Post Washington iyo abaabulan hab u yahay labada dhamaystiran oo la xiriira in ay ku turunturoodaan ee guud ahaan.
Naughts &, iskutallaabtiisana
Description: Connects qalab kala duwan in ay TV xagga qalabka Chromecast iyo ka dhigaysa dhaqanto TV sidii hal qoyaan sawir oo waaweyn, jidaynayey badan isticmaala barbaro shaashadda mar iyada oo qalabka ay.
Naughts iyo Karoosyo
Description: ogolaaneysa labada ciyaaryahan si ay u isticmaalaan taleefannadooda ama kiniin ah in ay ku xidhmaan Chromecast mar iyo ciyaaro kulan ka mid ah TicTacToe. Labada ciyaaryahan sii wado ilaa mid ka mid ah uu leeyahay hal kulan ah. Iyadoo dhaqaaqo kasta waxaa synced in qalab kasta, chromecast ah u dhaqmo sida aragtida nool iyo scoreboard ah shaashadda weyn.
Description: Haddii ay dhibaato kaa haysato helo barnaamijyadooda u qalab cusub Chromecast iyo aad leedahay aalad Android, app caawimaad ma kuu sahmiyo jihada barnaamijyadooda xisbiga saddexaad sameeyey si la Chromecast shaqeeyaan.
Description: AllCast waa xarun si aad u sii qulquli aad raalli ka tahay inay xulashada qalabka, oo ay ku jiraan qalabka Google Chromecast ah. Waxaa jira version ah oo lacag la'aan ah si aad u xadidaya in la daawado 1 daqiiqo ah content kasta oo ah, sidaa darteed waa in aad iibsato app premium ay si buuxda u raaxaysatid ka kooban.
Price: Free, Premium ($ 4.99)
Description: app waxaa loogu talagalay inay ku tuuraan ah screen guriga cusub si uu u badalo Chromecast ee shaashadda guriga default. Horumarinta waxa ay ahaayeen cad in la tilmaamo in aad ma beddali karto screen guriga weli, sidaas app this halkii ka shaqeeya by hoorto ah screen guriga metelay in aad TV. Darajada Customization ka mid ah widgets for news, saacad, gaadiidka, cimilada iyo qaar kaloo badan. No kale app waxaa loogu talagalay in laguugu beddelo screen guriga hab u yahay dareen iyo sida waxtar leh maadaama ay tani ka mid ah.
Description: Gallery Kabka takhasusay hoorto content qalabka TV xiran, sidaa darteed waa wax iska caadi ah in taageero in ay ku jiraan qalab geeyo Google ayaa sidoo kale. Sharaxaad ayaa sheegtay in awoodaha geeyo waxaa ku koobanyihiin oo kaliya waxa qalab aad u taageeri karto, si aad u sii qulquli yaabaa gebi ahaanba wax ka telefoonka ama kiniin. Adeegani wuxu taageeraa files waxa aad telefoon taas oo u wanaagsan la wadaago videos qaaday telefoonka.
Price: Free, Premium ($ 2.99)
Description: Tani Tababaraha app podcast kuu ogolaanaya in aad si fudud u sii joogo ilaa taariikhda oo dhan ee aad audio iyo video podcasts jecel. Integration la goobaha Times dajiyaan oo dhan ee aad content iyo mobilada si app, ilaalinta wax walba u hagaagsan u dhexeeya adeegyada. Streaming in Chromecast ka dhigaysa riyaaqayaa aad Idaacada jecel shaashadda weyn aad u fudud.
Description: Tani waa waaxda music ee Google Play Store, bixiya malaayiin songs in lagu daro in aad maktabadda Google Music. Haddii aad doorato in subscribe to Google Music Dhamaan Access ah, waxaad heli doontaa in ay helaan oo dhan Google Music Library, iyo sidoo kale ururinta music shakhsi u gaar ah haddii aad doorato in aad u geliyaan.
Price: Items yihiin shaqsi ahaan jaban, ama $ 9.99 bishiiba oo dhan Access
Description: Pandora bixisaa lacag la'aan ah, radio shakhsi in dadka isticmaala ee leh awood ku qabsan awood badan aad music iyada oo ay adeeg bixisay. Chromecast ciyaara iyada oo aad TV, oo bixisa fursad ay ku ciyaaraan music aad jeceshahay ku hadla ugu waasac iyada oo gurigaaga aad.
Price: Free iyo Premium ($ 3.99 bishiiba)
Description: Songza loogu talagalay in lagu dhiso playlist ah ku saleysnaadaan aad niyadda iyo muusikada door bidayso. Waa maxay dhigaya adeegan laga reebo jira fursado playlist ah oo ay dhisay, una playlists galay Hawlaha, qaybaha, Xaalado, iyo Tobaneeyo. Waa arrin aad u fudud in la wada tuur playlist ah ee seconds in aad maqli karto si ay u saacadood.
Price: Free (Ad-taageerayaan) Premium ($ 0.99 halkii todobaad)
Description: Rdio waxaa ka go'an in dadka xidhiidhinaya ay jecel artist, songs, playlists iyo saaxiibada. Iyadoo in ka badan 20 milyan oo heeso waa ay fududahay in la helo jir, music la yaqaan iyo wax cusub oo xiiso leh tuuro ee isku dhafka ah. Dhexgalka Facebook ka dhigayaa mid fudud in ay ku xidhmaan saaxiibada iyo music.
Price: Free iyo Premium ($ 4.99 bishiiba)
> Resource > Apps > Liiska Comprehensive iyo balaaran ee Apps sameeyey dadka aawadiis ee Google ayaa Chromecast